जब त्यो रात ऐश्वर्यालाई अभिषेकले यसरी प्रपोज गरे, किन ऐश्वर्याले अस्वीकार गर्नै सकिनन् ? -
जब त्यो रात ऐश्वर्यालाई अभिषेकले यसरी प्रपोज गरे, किन ऐश्वर्याले अस्वीकार गर्नै सकिनन् ?
न कुनै हाईफाई रेस्टुरेण्ट, न म्युजिक या न कुनै डायमण्ड रिङ । महानायक अमिताभ बच्चन छोराका पुत्र अभिषेक बच्चनले ‘गुरु’ फिल्ममा प्रयोग फिल्ममा प्रयोग गरेको एउटा औठी दिएर नायिका ऐश्वर्या रायलाई विवाहको प्रस्ताव राखेका थिए। विवाहपछि अभिषेकले दिएको एक अन्तर्वाता उनले भनेजका छन्, “ऐश्वर्यालाई म्यारिज प्रपोज (विवाहको लागि प्रस्ताव ) गर्नु भन्दा पहिले म अमेरिकाको न्युयोर्कमा एउटा फिल्मको सुटिङमा व्यस्त थिएँ।
त्यहीबेलाएक दिन राती होटलको बालकनीमा बसिरहेकी ऐश्वर्यालाई देखेपछि मेरो मनमा विवाह गर्ने सोच आयो । तर त्यसको केही वर्षपछि टोरोण्टोमा ‘गुरु’ फिल्मको प्रिमियर सकाएपछि जब हामी सबै स्टारकास्ट न्यूयोर्क पुग्यो तब मैले ऐश्वर्यालाई सोही होटलकै पुरानै बालकनीमा लगेर प्रपोज गरेको हुँ ।” ऐश्वर्याले पनि विना कुनै हिचकिचाहट अभिषेकको विवाहको प्रस्ताव स्वीकार गरिन् । सोही दिनबाट यी दुई कपलको सम्बन्धले नयाँ मोड लियो । त्यहाँबाट मुम्बई फर्कनेबित्तिकै दुबैले आफ्नो परिवारलाई यो कुरा सेयर गरे ।
१४ जनवरी २००७ मा अमिताभ बच्चनको घरमा यी दुई जनाको इन्गेजमेन्ट भयो र त्यसको तीन महिना पछि २० अप्रिलमा उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिए । तर यी दुईको रोमान्स भने निकै अघिदेखि नै सुरुभएको थियो । फिल्म ‘कुछ न कहो’को सुटिङका दौरान अभिषेक ऐश्वर्याको प्रेममा परेका थिए । यो फिल्मको सुटिङ भइरहेको समयमा ऐश्वर्याका पूर्वप्रमी सलमान खान सुटिङस्थलमा पुगे र ऐशसँग नराम्रो व्यवहार गरे । यो कुरा अभिषेकलाई निकै नराम्रो लागेको थियो । यो फिल्मको सुटिङपछि नै ऐश र अभिषेकको भेटघाट बाक्लिएको थियो ।
Previous यी हुन् पाँच लाखको थप्पड हान्ने चर्चित भारतीय नायक !
Next यसरी भएकाे थियाे ताप्लेजुङमा पाथिभरा देविकाे उत्पति